Massimiliano Allegri oo carabka ku adkeeyay in Cristiano Ronaldo uu yahay weeraryahanka ugu fiican aduunka – Gool FM
Massimiliano Allegri oo carabka ku adkeeyay in Cristiano Ronaldo uu yahay weeraryahanka ugu fiican aduunka
(Champions League) 23 Okt 2018.Tababaraha kooxda Juventus ee Massimiliano Allegri ayaa ku qeexay in Cristiano Ronaldo inuu yahay weeraryahanka ugu fiican aduunka, isagoo dhinaca kale tilmaamay inay suuragal tahay in kulanka caawa ka dhici doono garoonka Old Trafford uusan ka ciyaarin dhanka weerarka.
Cristiano Ronaldo ayaa caawa kahor imaan doono kooxdiisii hore Manchester United uu kusoo caan baxay kahor inta uusan u dhaqaaqin Real Madrid, si ay u wada ciyaaraan kulankooda 3-aad ee Champions League.
“Cristiano waa weeraryahanka ugu fiican aduunka, sidaas darteed waa in shaqsiyaadka kale ay fiicnaadaan isla markaana ay fahmaan meesha uu u dhaqaaqayo, diiradana ay saaraan”.
“Manchester United waa koox adag oo marka ay dhibaato ku jiraan xalin karta, waxay ku wanaagsan yihiin sidoo kale inay ciyaaraan kubadaha sare”.
“Sidaas daraadeed waxaan u baahanahay inaan fiicnaano kulankan, ciyaaraha sidaan oo kale ah ma dhamaanayaan ilaa garsoorka uu ka dhawaajiyo seeriga, waxaan u baahanahay inaan diirada saarno ciyaarta illaa daqiiqada ugu dambeysa”.
Mourinho oo caawa u diyaariyay abaal marin xiddigiisa Anthony Martial
Shaxda rasmiga ah ee AEK Athens vs Bayern Munich